Ingqungquthela elandelayo yevidiyo evela kwiLogitech Rally Bar | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | | Iziphaluka
I-Logitech iphinda iguqule umhlaba weenkomfa zevidiyo ngoku njengoko ihamba noluhlu lwezixhobo zokusika njengezinto ezilula njengoko ziguquguqukayo ezisebenzisa yonke into enikelwa ziinjini zeenkomfa zevidiyo kunye namandla, anje Microsoft Teams okanye Zoom. Ngale Logitech inomdla wokubandakanya amanqaku aphezulu kunye neemveliso ezinje ngezintsha I-Logitech Rally Bar, ikhamera eyilelwe ngokukodwa iindawo ezinobungakanani obuphakathi kunye neLogitech Rally Bar Mini, egxile kwiindawo ezincinci, Ukunika umgangatho ophantsi phantse kumgangatho bhanyabhanya kwiinkomfa zakho zevidiyo.
Sikwafumana isixhobo esenzelwe iintlanganiso kumagumbi amakhulu anje nge I-Logitech RoomMate, isixhobo esikwaziyo ukuqhuba iinkonzo ze-videoconferencing ezifana neRally Plus ngaphandle kwesidingo sekhompyuter. Ezi mveliso zintsha zokwenza lula nokwenza ngcono iintlanganiso ezikude, ukuququzelela ulawulo kunye nokuqala kwiindawo zomsebenzi ezinezona zinto ziphambili kwintengiso.
1 Ukuphinda ubambe ingqungquthela yevidiyo
2 Iimpawu zeRally Bar kunye neRally Bar Mini
Ukuphinda ubambe ingqungquthela yevidiyo
Kancinci kancinci, inkomfa yevidiyo idityaniswa njengeyona nto yemihla ngemihla kwiindawo ezininzi zomsebenzi kwaye iLogitech ifuna ukuzibeka kwiimveliso zayo ezintsha kwicandelo, ibe ngumanduleli kumagumbi okuhlangana alandelayo. Obu buchwephesha buya kuvumela iinkomfa ukuba zibanjwe ngendlela yemveli ngokupheleleyo kusetyenziswa iinkonzo eziphambili ezinje ngeeMicrosoft Teams kunye neZoom, kunye ne imo engaxhunyiwe kwi-intanethi isebenzisa i-USB phantse kuyo nayiphi na ikhompyuter.
Ikhathalogu entsha yezisombululo eziphawulwe yiLogitech ibandakanya ezinye iinkonzo zeenkomfa zevidiyo ezinje ngeGoTo, Pexip kunye neRingCentral. Ukubakho kokusebenzisa ikhamera yesibini kuhlalutyo lwamagumbi kusetyenziswa ubukrelekrele bokufakelwa kukwabandakanywa.. Le teknoloji iyakwazi ukuguqula naliphi na igumbi ngaphandle kobungakanani bayo okanye indawo yayo kwiziko leentlanganiso zenkampani, kubandakanya nezo zisebenza kude kude nasekhaya.
Iimpawu zeRally Bar kunye neRally Bar Mini
Optics ngezigqibo ukuya kuthi ga kwi-4K: Iintlanganiso ezinomgangatho ophantsi kunye nokusondeza okubonakalayo ukuya kuthi ga kwi-5x efikelela kwi-15x ngokwamanani.
Umsindo ocacileyo weCrystal Enkosi kubuchwephesha bobuchwephesha obuvela kwiLogitech enika iintlanganiso ngesandi esimnandi nesicacileyo.
Uyilo olukhulu: Izixhobo ezitsha zinomtsalane okhangayo kunye nekamva kunye nemigca ejikeleziweyo, kunye nelaphu eliphindiweyo lepolyester elisonga izithethi zabo. Uyilo oluncinci olunemibala engathathi hlangothi efana nomhlophe okanye igrafite
I-AI edibeneyoZombini iibha zevidiyo zixhotyiswe ngobuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha obuyilwe nguLogitech, obona ngexesha elifanelekileyo abantu abahlanganisiweyo kunye negumbi abakulo, kuqinisekisa ukuba ukugxila kunye nokukhanya kulungile.
Sinolwazi oluthe kratya kunye neempawu zobuchwephesha kwiwebhusayithi esemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iziphaluka » Ingqungquthela yevidiyo elandelayo ye-Logitech Rally Bar